Home » အသားပေး » အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသော Shot ရှာဖွေနေပါသလား ဒါဟာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစတင်။
အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသော Shot ရှာဖွေနေပါသလား ဒါဟာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစတင်။
Elisabetta Cartoni, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ CARTONI (SPA) အားဖြင့်
ကျွန်မရဲ့မိသားစုထက်ပို 80 နှစ်ပေါင်းကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာအကြှနျုပျ၏အဖိုး Renato ငါ့အဘ, Guido Cartoni, ကို '40s အတွက် Gyro ကင်မရာအကြီးအကဲများတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကလူကြိုက်များဘဲလ် & Howell နှင့်မစ်ချယ်ကင်မရာများအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့နှင့်မိုးသည်းထန်စွာခဲ့ကြသည်။ အထောက်အပံ့များကော်လံသို့မဟုတ်နို့တိုက်တရိစ္ဆာန်များ၏ထိပ်ပေါ်မှာအဓိကအားဖြင့်ဂီယာ-အကြီးအကဲများတက်ရောက်ကြသည်။ ကင်မရာများ ထိုအချိန်မှစ. အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပါပြီ။ အများစုမှာသေးငယ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ ပံ့ပိုးမှုစနစ်များကိုအလားတူဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှတဆင့်ဝင်ကြပြီ။ သူတို့ကလည်းပေါ့ပါးထိန်းချုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျး, ကင်မရာထောက်ခံမှုနောက်ကွယ်မှနောက်ခံကျောင်းအုပ်ကြီးမပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ A ကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုစနစ်ကင်မရာအတွက်တည်ငြိမ်ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ အော်ပရေတာလွယ်ကူခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူကင်မရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဒါဟာအစစုံလင်သော counterbalance နှင့်ပြန်လုပ်ချောမွေ့ဆွဲပေးထားပါတယ်။
အများကြီးပြောင်းလဲသွားတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူများဖြစ်ကြသည်။ ကင်မရာကိုဦးခေါင်းအဟောင်းကာလ၌ရိုက်ကူးရေးနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာတစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တင်းကျပ်စွာဖှဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိကြ၏။ အများဆုံးတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာအလုပ်သင်စနစ်၏ရာထူးတဆင့်ထမြောက်တော်မူသည်အတိုင်းသူတို့ကအတွင်းပိုင်းထွက်သူတို့ရဲ့ယာဉ်သိတယ်။ ကင်မရာများပိုင်ဆိုင်စျေးကြီးများနှင့်လည်ပတ်ရန်ခက်ခဲခဲ့ကြသည်။ သင်တစ်ဦးရုပ်ရှင်အစုံပေါ်အောင်မြင်သွားလျှင်တိုင်းအသေးစိတ်သိရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကြှနျုပျတို့ခေါငျးသို့မဟုတ် tripod အဘယ်သူအားမျှအနေနဲ့ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲတို့နှင့်အတူကြွ။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပြီးသားမသိခဲ့ပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြောပြနိုင်ဘယ်အရာမရှိ။
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ကင်မရာများကနှင့်အတိတ်၏ကင်မရာများထက်လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးသက်သာသေးငယ်, ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ရုပ်ရှင်ပညာ၏လယ်ပြင်ကျယ်ပြန့်ပါပြီ။ အတိတ်ကာလတစ်ဦးပိုင်ဆိုင်၏အိပ်မက်မြင်ပြီမဟုတ်ဘူးသူကလူများ, 35mm ကင်မရာ, ယခုအများအပြား DSLR ကင်မရာရှိပေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အော်ပရေတာများနှင့်ရိုက်ကူးရေးဖြစ်လာဖို့အများကြီးလူသစ်ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကြိုဆိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတီထွင်ဖန်တီးမှု၏ဆန်းသစ်သောပုံစံများကိုအာဏာအပ်နှင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းယနေ့ကင်မရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူများစွာသောလူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်ကတဆင့်တက်လာမယ့်များ၏အကျိုးအတွက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဆိုလိုသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုစနစ်များနှင့် tools တွေကိုယခုညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်နဲ့အတူလာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏လျော်သောလျှောက်လွှာတွင်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ပညာပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
နယူးဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများတိုင်းခြောက်လပေါ်ထွန်းနေကြသည်နှင့်ဤအသစ်အကင်မရာများအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာ၏ရှုပ်ထွေးသောအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်။ အော်ပရေတာကိုမကြာခဏကဤပစ္စည်းအသစ်၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှကျွမ်းကျင်သို့အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးမြှုပ်နှံထား, ဒါသူတို့ကင်မရာများအောက်ဝင်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်ယူသလောက်အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့သောအခါအမြဲငါ့ကိုအံ့သြသွားတယ်။
တစ်ဦးကအရည်အသွေးကိုထောက်ခံမှု system ကိုစင်ကြယ်သောချွန်ထက်ချောမွေ့ရိုက်ချက်များရိုက်ကူးရန်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါဟာမလိုလားအပ်တဲ့ရွေ့လျားမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုံလောက်သော torsion ကျောမှုနှင့်အတူကြံ့ခိုင်ခြေထောက်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအစ, ချောမွေ့သတ်မရှိလုပ်ပိုင်နှင့်တိကျစွာ Control လှုပ်ရှားမှုသေချာစေရန်စုံလင်သော counterbalance နှင့်ဆွဲရုံညာဘက်ငွေပမာဏကိုပေးရမညျ။ တစ်ခုစံပြထောက်ခံမှုစနစ်, ဒယ်အိုးနှင့် tilt အကြားစုံလင်သော Synergy ရှိသေး၏။ ကျွန်တော်သစ်ကိုအရည်ခေါင်းပေါ်မှာလုပ်ဆောင်စစ်ဆေးမှုများတထောင့်ဖြတ်ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ခေါင်းကို jerking မရှိဘဲထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကင်မရာကိုရွှေ့နိုင်လျှင်ကနှစ်ခုအရည်ယူနစ်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေကြဆိုလိုသည်။
ထိပ်တန်းအဆုံးထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ် caliber တည်ငြိမ်မှုကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းထောက်ခံမှုစနစ်များ, counterbalance နှင့်ဆွဲဒီဇိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သငျသညျစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်သောကြောင့်, သင်တစ်ဦးအနိမ့်စျေးနှုန်းမှာရှုပ်ထွေးပြီးနည်းပညာနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များကိုအလွန်အမင်း devices များအင်ဂျင်နီယာကြသည်နှင့်သူတို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုချေးငှားကြဘူး။
တစ်ဦးကခေတ်သစ်အရည်ခေါင်းကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, testing နဲ့ပြီးတဲ့အမြင့်ဆုံးဘွဲ့လိုအပ်သည်တစ်တိကျစွာတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုင်း၏လက်ရာလက်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုအားနည်းစေလိမ့်မယ်။ ကင်မရာအော်ပရေတာအပေါငျးတို့သဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားကြသည် "စုံလငျ, shot ။ " အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအခွက်တဆယ်ရက်နေ့တွင်, ပထမ, မူတည်ပါတယ်။ သို့သော်ဂီယာလည်းအရေးပါပါတယ်။ သငျသညျအကောငျးဆုံးရိုက်ချက်ရချင်လျှင်, သင်ကောင်းတစ်ဦးကင်မရာနှင့်အကြီးမှန်ဘီလူးလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကသင်တစ်ဦးယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူကူညီပေးပါမည်။ ထိုအခါမူကား, အဲဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသောထောက်ခံမှု system ထဲကနေလာပါတယ်။ သငျသညျအဆင်းလှသောရိုက်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်စူပါဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများရှိသော်လည်း, သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှု system ကိုပျက်ကွက်လျှင်, သင်ပြီးနောက်နေရလဒ်မရကြလိမ့်မည်နိုင်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင်းစုံလင်သောရိုက်ချက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏ tools တွေကို-အားလုံးသင့်ရဲ့ tools တွေကို-ပညာရှိရှိရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။
Elisabetta Cartoni CARTONI (SpA), ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များအတွက်ရောမမြို့အခြေစိုက်ခေါင်းဆောင်၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1935 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် 1990 ကတည်းက Elisabetta ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်, ကုမ္ပဏီဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုအစဉ်အလာမှတဆင့်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာလက်ရှိကင်မရာကထောက်ခံမှုနည်းပညာများအတွက် 35 မူပိုင်ခွင့်ထက်ပိုမိုရရှိထားသူများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂုဏ်သတင်းကိုအတော်ပင်။
ယခင်: ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ (Lateral / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ...
နောက်တစ်ခု: Bluefish444 Avid မီဒီယာComposer®မှ SMPTE 2022 IP ကို ​​Capture အ Add
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ပုပြီးပြည့်စုံသော Shot ရှာဖွေနေဒါဟာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစတင်? ။ " ။ http://www.broadcastbeat.com/looking-for-the-perfect-shot-it-starts-with-support/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။